သတင်း - သတင်းစစ်ထုတ်ခြင်းစစ်ထုတ်ခြင်း
၁။ filter filter ကိုဖိပါ။ power supply ကိုချိတ်ဆက်ပါ၊ motor ကိုဖွင့်ပြီး filter press ၏ filter ကိုနှိပ်ပါ။ လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးမည့် filter ကိုမနှိပ်ခင် filter filter များ၏အရေအတွက်ကိုစစ်ဆေးရန်သတိထားပါ။ filter ပန်းကန်၏တံဆိပ်ခတ်မျက်နှာပြင်များအကြားမည်သည့်နိုင်ငံခြားကိစ္စမျှမရှိရ။ filter filter သည်အရေးအကြောင်းမရှိဘဲ filter plate တွင်ပြားနေလိမ့်မည်။
2. ဖိအားကိုထိန်းသိမ်းခြင်း: စက်မှုဖိအား filter ကိုစာနယ်ဇင်းများ၏ဖိအားကိုရောက်ရှိ။
၃။ အစာကျွေးခြင်းစစ်ထုတ်ခြင်း - ဖိအားထိန်းသိမ်းခြင်းအခြေအနေထဲသို့ ၀ င်ပြီးနောက်၊ ပိုက်လိုင်းအဆို့ရှင်တစ်ခုစီ၏အဖွင့်နှင့်ပိတ်အခြေအနေကိုစစ်ဆေးပြီးအမှားမရှိကြောင်းအတည်ပြုပြီးနောက်အစာကျွေးခြင်းစုပ်စက်ကိုစတင်ပါ။ အစာကျွေးသောအရည်သည်တွန်းကန်အားပြားပေါ်ရှိအပေါက်ပေါက်မှတစ်ဆင့်စီစစ်ထားသောအခန်းတစ်ခုစီထဲသို့ ၀ င်ရောက်ပြီးဖိအားအောက်ရှိဖိအားများအောက်တွင် filter ကိတ်မုန့်ကိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်ပေါ်စေသည်။ နို့တိုက်ကျွေးနေစဉ် filtrate နှင့်အစာဖိအားပြောင်းလဲမှုကိုသတိပြုမိရန်ဂရုပြုပါ။ feed pump ၏ရေအဆင့်သည်ပုံမှန်ဖြစ်သင့်ပြီး feed အပေါက်၏ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် filter plate ၏ကွဲလွဲမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဖိအားခြားနားချက်ကိုရှောင်ရှားရန်အတွက် feed pump သည်ပုံမှန်ဖြစ်သင့်သည်။ filtrate ဖြည်းဖြည်းစီးထွက်လာပြီးကိတ်မုန့်ရဲ့ဖိအားဟာ ၆ ကီလိုဂရမ်ကျော်သွားတဲ့အခါ feed pump ကိုပိတ်သွားမှာဖြစ်တယ်။
4. filter filter ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး filter cake ကိုဖယ်ရှားပါ။ ပါဝါကိုဖွင့်ပါ၊ motor ကိုဖွင့်ပါ။
5. စစ်ထုတ်သည့်အထည်ကိုသန့်ရှင်းအောင်ပြီးအောင်သန့်စင်ပါ။ filter အထည်ကိုသန့်ရှင်းရေးပြီးအောင်လုပ်သည့်အခါ filter အထည်ပျက်စီးခြင်းရှိမရှိ၊ feed hole နှင့် outlet hole ပိတ်ထားခြင်းရှိမရှိကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။ ပြီးတော့ filter plate သို့ဖိအားခြားနားမှုနှင့်ပျက်စီးမှုမှရှောင်ရှားရန်အချိန်တိုင်း feed feed ဝင်ပေါက်ကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါ။